‘Mo Farah Ingiriis Maaha. Waa Qaxooti, Dadkuna Uma Haystaan British’ – Brownlee
HomeWararka Maanta‘Mo Farah Ingiriis Maaha. Waa Qaxooti, Dadkuna Uma Haystaan British’ – Brownlee
20/12/2016 Abdiwahab Ahmed
“Ma garanayo sababta loo siin waayey ciyaartoygii ugu wanaagsanaa guud ahaan Ingiriiska sannadkan ama saddexda ugu sarreeya uu u noqon waayey, waxa laga yaabaa dadku uma haystaan inuu yahay British.” Sidaas waxa yidhi Alistair Brownlee oo ka hadlay sababta Mo Farah uu uga mid noqon waayey shakhsiga sannadka ugu fiican guud ahaan Britain ee ciyaaraha ama uu ugu soo bixi waayey saddexda qof ee ugu wanaagsan.
Mo Farah oo asalkiisu yahay Somali ayaa galay kaalinta afraad, waxaana uu ka dambeeyey saddex ciyaaryahan oo kale oo ku guuleystay billado tartankii Olambiga ay ka soo qaadeen, kuwaas oo dhamaantood uu ka guulo badnaa Mo Farah.
33 jirkan orodyahanka ah ayaa kaalinta saddexaad ee shakhsiga ugu wanaagsan ciyaartoyga Britain galay sannadkii 2011, laakiin kaalinta afraad ayuu u daaddegay 2013, halka uu lixaad usii dhacay 2015, waxaana uu aqoonsiga shakhsiga sannadka ku guuleystay sannadkii 2012 oo kaliya, iyadoo guulaha uu gaadhayna ay sumcad iyo magac ba usoo hooyeen Ingiriiska.
Farah waxa uu sannadkan ku guuleystay laba billadood oo dahab ah oo uu ka soo qaatay ciyaarihii Olymbiga ee Rio de Janiero oo uu ku tartamay 5,000 mitir iyo 10,000 mitir, kuwaas oo sidan oo kale uu hal mar u wada qaatay sannadkii 2012 markii London lagu qabtay tartanka afar sannadood ka hor.
Guulahani waxay ka dhigeen ciyaartoygii ugu guulaha badnaa taariikhda waddanka UK.
Waxa uu jebiyey rikoodhkii Britain ee orodka 3,000 mitir iyo guushiisii saddexaad ee xidhiidh ah ee Great North Run oo 2016 uu ku ceshaday.
Haddaba, Brownlee iyo Nick Skelton oo kaalinta labaad iyo saddexaad ka galay shakhsiga ugu wanaagsan ciyaaryahannada Britain ‘Sports Personality’ ayaa waxay layaab ku tilmaameen sababta Mo Farah looga waayey saddexda qof ee ugu sarraysa isagoo soo hooyey guulo aanay cidinka ku dhowaan karin sannadkan dhamaadka ah, looguna caleemo saaray Andy Murray.
Brownlee oo kaalinta labaad galay, ayaa isagoo layaabka helay ka hadlaya waxa uu tilmaamay in arrintu salka ku hayso cunsuriyad, waxaanu yidhi: “Ma hubo sababta sidani u dhacday. Waxa laga yaabaa in dadku aanay u haysanin inuu yahay British. Waxa ku tababartaa dalka dibeddiisa. Waa arrin murugo leh, sababtoo ah waa shakhsiga ugu wanaagsan sheekada Britain ee ciyaaraha.” Sidaas ayuu yidhi Brownlee.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu tilmaamay in dadka qaar ay caloosha ku haystaan taariikhda Mo Farah ee ah inuu dalka ku galay qaxootinimo, waxaanu yidhi: “Waxay arrintu tahay: waa qof Britain yimid isagoo carruur ah, qaxooti ah, kaddibna uu macallin iskuul helay inuu yahay qof ku habboon ciyaaraha, kaddibna Ingiriiska metelay oo noqday ninka ugu wanaagsan dunida.”
Brownlee waxa uu caddeeyey in uu u codeeyey Mo Farah, waxaanu yidhi: “Sheekadani waa mid layaab leh Britain dhexdeeda. Anigu waxaan u codeeyey Mo.”
Skelton oo isaguna kaalinta saddexaad galay, ayaa sheegay inuu u codeeyey Mo Farah, waxaanu yidhi: “Waxaan u codeeyey Mo Farah. Waxa uu sameeyey guulo cajiib ah, shaqo adag iyo jidhkiisa oo uu ilaaliyey. Ma garanayo sababta guulihiisa loogu ixtiraami waayey, waxa laga yaabaa taageereyaasha ciyaaruhu may daawanayn caawa. Inaad ku guuleysato saddexdaa billadood oo dahab ah, waxay ahayd inuu ku guuleysto shakhsiga sannadka.”
Ololinta Sepp Blatter : Taalo Gudoomiyaha Fifa Laga Caydhiyey Loo Ekaysiiyey Oo Dab La Qabad Siin Doono
Premier League & Telefishanka NBC Oo Heshiis Baahinta Ah Kala Saxeexday